နှစ်ယောက်သားဆုံရင် အများဆုံးပြောဖြစ်ကြတာ အစားအသောက်တွေအကြောင်းပါ ဆိုတဲ့ JESSICA & RACHEL - Yangon Media Group
Photo – KAN SU HO(Black & White)
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ 8days cover star အဖြစ် JESSICA & RACHEL ကိုရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပါ တယ်။ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်က မကြာခဏ ဆိုသလို Cover song တွေ အတူတူ ဆိုပြီး အွန်လိုင်းတင် လေ့ရှိသလို RACHEL ကလည်း ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ သီချင်းတွေ အွန် လိုင်းပေါ်မှာ သီဆို တင်လေ့ရှိပါ တယ်။ အနီရောင်အလွမ်းည သီချင်း တွေဟာ နားထောင်သူပရိသတ် များစွာရှိခဲ့သလို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင် တေးအဖြစ်ပါ အသုံးပြုခံခဲ့ရတာဖြစ် ပါတယ်။
Q. ဒီနေ့မျက်နှာဖုံး ရိုက်ရတဲ့ ခံစားမှု…
RACHEL- နိုနို ညီမ နာမည် နိုနိုပါ။ ပျော်ပါတယ်။ RACHEL တစ်ခါမှ မရိုက်ဖူးဘူး။ JESSICA နဲ့လည်း ငယ်ငယ်လေး ကတည်းကခင်တဲ့သူဆိုတော့ သူနဲ့ အတူတူ တွဲရိုက်ရတာ ပျော်ပါ တယ်။
Q. မီဒီယာနဲ့ ပထမဆုံး တွေ့ ဆုံခြင်းလား။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ကိုယ့်သီချင်းကို ပရိ သတ်တွေ အားပေးတဲ့ ခံစားမှု…
RACHEL – ဟုတ်ကဲ့။ ပျော် တာပေါ့နော်။ စစတင်ခြင်းတုန်းက ဒီလောက်ကြီးပေါက်သွားမယ်လို့ မထင်ထားဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကြည့်ရှုသူ တွေများလာတော့လည်း ရင်ခုန် တယ်။
Q. ည ရုပ်ရှင်မှာ ဇာတ်ဝင် သီချင်း သုံးခံရတဲ့ ခံစားမှုကရော။
RACHEL -ဟုတ် ညရုပ်ရှင် ပါတဲ့ ထရေစီနဲ့က တော်တော်ခင် တယ်။ သူဒီဇာတ်ကားရိုက်နေတာ လည်း ကြာပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုထူး ပိုင် ဒါရိုက်တာထူးပိုင်ဇော်ဦးက ဒီသီ ချင်းရုပ်ရှင်မှာ သုံးမယ်ရမလားဆို တော့ ရတယ်သုံးဆိုပြီးပေးသုံး လိုက် တာ။
Q. နိုနိုသီချင်းကို တချို့တွေ ပြန်ဆို ပြီးတင်ကြတဲ့အပေါ်မှာရော ဘယ်လိုခံစားရလဲ။
RACHEL – ဟုတ် ညီမ တော်တော်များများကို ဝင်ကြည့်ဖြစ် တယ်။ TEDDY ပြန်ဆိုထားတာ လေးလည်း ညီမ တော်တော် သဘောကျတယ်။
Q. ကျန်ခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာတုန်း ကလည်း သီချင်းတစ်ပုဒ် တင်ခဲ့သေး တယ်နော်။
RACHEL – ဟုတ် အလွှာလို့ ခေါ်တယ်။ အဲဒီသီချင်းကတစ် ယောက်တည်း စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ အကြောင်းရေးထားတာ။ သီချင်း ရေးရင် အချစ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ထက် တစ်ယောက်တည်း ရှိနေတဲ့ ခံစား ချက်ကိုရေးတာ၊ အချစ်မှ သီချင်း ရေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေနော်။
Q. ဒီဂီတပုံစံကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်ဖြစ်တာလဲ။
RACHEL – နိုနို အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် ကိုယ် ဘာ MUSIC ကို ရွေးမိမှန်းတောင်မသိဘူး။ နိုနို အား အသန်ဆုံး INSTRUMENT က GUITAR ပြီးတော့ PIANO လည်း နည်းနည်းတီးတတ်တယ်။ ငယ်ငယ် တုန်းက PIANO တီးတာ ပိုများတယ်။ ခုမတီးဖြစ်တာ တော် တော် ကြာပြီ GUITAR ကထွက်တဲ့ အသံနဲ့ပဲ စာသားတွေထည့်ကြည့် တယ်။ပြီးတော့အဆင်ပြေရင်ထွက် လာ ရင်ထွက်လာသလို ဆိုဖြစ်လိုက် တာ။
Q.စီးရီးအနေနဲ့ရော ထွက်ဖို့ ရှိလား။
RACHEL – ခုနိုနိုက ကျောင်း တက်နေတာ ပြန်လာရင်တော့ အားရင်အားသလို သီချင်းသွင်းလေ့ ရှိတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာလည်း အသံ သွင်းတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ ဝယ်ထား တယ်ဆိုတော့ သီချင်းသွင်းဖြစ် တယ်။ စီးရီးအနေနဲ့ ကျောင်းပြီး ရင်ထုတ်တော့ထုတ်ချင်တယ်။ MINI ALBUM လေးတော့အရင် ထုတ်ချင်တယ်။
ှQ. သီချင်းဆိုတာကို မိသားစု တွေက အားပေးလား။
RACHEL – ဟုတ်မေမေက အားပေးတယ်။ နိုနိုအစ်ကိုတွေက လည်း နိုနို သီချင်းဆိုတာ ကောင်း တယ်လို့ပြောကြတယ်။ နိုနို သီချင်း တင်ပြီဆို ပထမဆုံး SHARE ပေး တာမေမေပဲ။
Q. ပန်းချီ ဆွဲရတဲ့ ခံစားမှု ကရော
RACHEL -ပုံတွေဆွဲရတာ ပျော်တယ်။ MUSIC နဲ့ ထပ်တူထပ် မျှပါပဲ။
Q. မေးတာတွေအပြင် နိုနို ဘာများပြောချင်ပါသေးလဲ။
RACHEL – RACHEL ကို အားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ celebrity ကြီးလို မနေချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ RACHEL TAY ZA facebook မှာ သီချင်းတင်တိုင်း တင်ပေးမယ်။ တချို့ပုံလေးတွေ public post တင်ပေးပါမယ်။ ညီမ လေး JESSICA လည်းဖေဖော်ဝါရီ မှာ မဲလ်ဘုန်းလာမယ်ဆိုတော့ နှစ် ယောက်တူတူဆိုပြီး Cover song လေးတင်ပေးပါမယ်လို့။
Q. လူငယ်တစ်ယောက်အနေ နဲ့ ဘယ်လိုဖက်ရှင်တွေသဘောကျ လဲ။
RACHEL – နိုနို ဖက်ရှင်က နည်းနည်းကြောင်တယ်။အဖွားကြီးပေါက်စလေးလို ဝတ်ရ တာကြိုက်တယ်။ နိုနို့အမေအင်္ကျီ တွေ ယူဝတ်တတ်သလို မေမေ့ အမေ နိုနို့အဘွားလုံချည်တွေဆို လည်း ခုထိ ယူဝတ်တတ်တယ်။အဘွားလုံချည်တွေ ဂါဝန်ယူချုပ် ဝတ်တယ်။
Q. လူငယ်တစ်ယောက်အနေ နဲ့ လူငယ်တွေကို ပြောပြချင်တဲ့ စကားက…
RACHEL – ကိုယ်ယုံကြည် ရာကို လုပ်ပါ။ ဘယ်သူတားတား ကိုယ်ယုံကြည်ရင်ဆက်လုပ်ပါလို့။နိုနိုကတော့ သူများမလုပ်နဲ့ ပြော ရင်ပိုလုပ်ချင်တယ်။ နိုနို မေမေက တော့ သီချင်းဆိုတာ ပန်းချီဆွဲတာ တွေ မတားခဲ့တဲ့အတွက် မေမေ့ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်။
Q. JESSICA ရော ဒီနေ့ မျက်နှာဖုံးရိုက်ကူးမှုအတွက် ဘယ် လိုခံစားရလဲ။
JESSICA – JESSICA နဲ့ နိုနို ဝတ်ထားတဲ့ ဖက်ရှင်က အပြင် မှာ နှစ်ယောက်သားဝတ်ဖြစ်တဲ့ ပုံစံလေးတွေဆိုတော့ ရိုက်နေရ တာလွတ်လပ်တယ်။ သဘာဝ ဆန် တဲ့ ပုံလေးတွေဆိုတော့ ပျော်ပါ တယ်။
Q. နှစ်ယောက်တူတူ တေး စီးရီးထွက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိလား။
JESSICA – ခုလောလော ဆယ် နိုနိုကလည်း ဒီမှာ အကြာကြီး ရှိနေမှာမဟုတ်တော့ နှစ်ယောက် သီးသန့်သီချင်းသွင်းဖို့တော့ အစီ အစဉ် မရှိသေးပါဘူး။
Q. နှစ်ယောက်သားဆုံရင် အများဆုံးပြောဖြစ်တဲ့ အကြောင်း အရာက ဘာဖြစ်မလဲ။
JESSICA – အစားအစာ တွေ စားသောက်ဆိုင်တွေ အကြောင်း။ နှစ်ယောက်စလုံးက အစား သောင်းကျန်းတယ်။ အပြင်သွားရင်လည်း အစားဘက်ပဲ ဦးစား ပေးတယ်။
Q. 8days ပရိသတ်ကို 8days ပြောချင်တာဆိုရင်…
JESSICA – 8days ပရိသတ်ကြီး နိုနိုကို အားပေးပေးပါ လို့။